Waa maxay "xad dhaaf" – Transfer Galaxy
Waa maxay "xad dhaaf"
Xadka xadidan waa xaddi ku meel gaadh ah oo la kordhiyay oo la siinayo macaamiisha u baahan inay diraan lacag ka badan xadiga caadiga ah, iyo ujeedo gaar ah. Xadka dheeriga ah wuxuu hada u furan yahay macaamiisha iswiidhishka kaliya.
Sideen u codsadaa xadka dheeriga ah?
Si aad u codsato xadka dheeriga ah, waxaanu kaga baahannahay macluumaad dheeraad ah. Fadlan buuxi foomkasi aad u dalbato: https://tgxy.it/extra-limit
Mudo intee leeg ayay qaadataa in codsiga la aqbalo?
Markii aad si faahfaahsan oo sax ah u sharaxdo baahidaada, waxay u badan tahay inay kugu soo noqono si dhakhso leh. Guud ahaan, waxaan kugu soo laaban doonaa 48 saacadood gudahood markaan helno dhammaan macluumaadka loo baahan yahay.
Waxaan rabnaa inaan ku xasuusino in adeegeenna loogu talagalay ujeedooyin gaar ahaaneed. Waxaad lacag ka diri kartaa naftada kaliya. Haddaad ka caawineysid xubin qoyska ka mid ah inay lacag soo diraan, waxaan kugu boorinaynaa inaad gacan ka u samayso koonto. Adoo wakiil ka ah qof kale ama ka diraya lacag waxay sababi kartaa in lagaa xanibo akoonkaga.
Su'aalaha kale ee quseeya xadkaaga? Fadlan nala soo xiriir.
42 din 55 au considerat acest conținut util